Tababar loo furay Saraakiil sugeysa Amniga doorashooyinka | Dayniile.com
Home Warkii Tababar loo furay Saraakiil sugeysa Amniga doorashooyinka
Wasaarada arrimaha gudaha iyo dowladaha Hoose ee Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee Caasimadda Hirshabeelle, tababar ugu furtay saraakill tiradoodu gaareeyso 20 xubnood, kana tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee ka hawlgala deegaannada Hirshabeelle.
Tabarbarkaani oo socon doona muddo lix maalmood ah ayaa lagu baridoonaa saraakiilsha lamaanaha, amniga ee ka qaybgashay tababarka sugida amniga xiliga doorashada Xildhibaannada golaha shacabka deedeegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle oo dhowaan lugu wado in ay qabsoonto.
Tababarka ayaa waxaa ka qaybgalay saraakiil sar sare oo ka kala socda Federaalka iyo maamulka Hirshabeelle.Taliyaha booliska Hirshabeelle Xasan Dhicisoow Xasan iyo Axmed Cali Aybakar oo ah madaxa xogheynta amniga doorashooyinka dalka ayaa ka hadlay muhiimadda tababarka uu u leeyahay laamaha amniga.
Ugu dambeeyn waxaa goobta ka hadlay Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo furay tababarka ayaa kula dardaarmay ciidamadii nasiibku u saamaxay in ay heelaan tababar aqoontooda kor loogu qaadayo in ay ilaaliyaan sirta amniga doorashada.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Gudiga Taakulaynta dadka laga soo musaafuriyey Magaalada Laascaanood
AK-47 iyo M16 waa laba ka mid ah qoryaha ugu badan ee la adeegsado, haddii ay ahaan lahayd fallaago, militari ama booliis. Doodda ku saabsan...
War deg deg ah: Cabdi xaashi oo Noqday Senetarkii ugu horeeyay...
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Heer oo sheegay in Degmada Baraawe ay noqon...
Taliyaha Xooga Dalka iyo Saraakiil Kale oo kuwajahan Dhusamareeb
Golaha Baarlamaanka Dowad Deegaanka Soomaalida oo kallfadhigoodii lixaad maanta u doortay...
Dowladda Itoobiya oo ku eedeysay dagaal yahanada mucaaradka Tigreega iney dileen...